Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir oo ku baaqay in doorashadu ku dhacdo xiligeeda
Sunday September 06, 2020 - 01:56:49
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir ayaa ugu baaqay madaxda dowlada Federaalka ineey doorashada ku qabtaan xiligii loogu talagalay si looga fogaado qalalaase siyaasadeed. Mr Cabdishakuur ayaa ugu baaqay madaxweeyne Farmaajo inaanuu dalka gelin isqab-qabsi iyo qalalaase siyaasadeed oo aan xiligaan loo baahneeyn si taas looga fogaadana ineey tahay in masuuliyiinta dowladdu dhegeeystaan talada waxgaradka iyo hoggaamiyeyaasha ummada.
Cabdishakuur ayaa ku booriyey Madaxweeyne Farmaajo inuu heeysto fursad qaaliya eeyna tahay inaan la lumin fursadaas oo goaan laga wada gaaro aayaha doorashada dalka.
Dhowaan waxaa yimid magaalada muqdisho Madaxweeyne yaasha Puntland iyo Jubaland si eey wadahadal uga galaan arrinta doorashada oo muran badani ka taagan yahay kadib markii dowlada Federaalku caddeeyn weeysay qaabka iyo goorta doorashadu dheceeyso.
Waxaa lagu wadaa biloowga sanadka soo socda in dalka Soomaaliya eey ka dhacdo doorasho madaxweeyne oo 4 tii sanaba mar ineey dhacdo heshiis lagu ahaa labaatankii sano ee lasoo dhaafay taasoo soo bilaabatay xiligii shirkii Carta iyo dowladii Dr Cabdiqaasin Salaad Xasan.
30/08/2018 - 02:36:23
06/09/2020 - 01:56:49